Hyundai ကုမ္ပဏီထုတ် Luxury ကားအမှတ်တံဆိပ်ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး၊ ရှန်ဟိုင်းရှိ BM Line မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပေါ်တွင် အဆန်းတကြယ် ပြသသွားမည် - Pandaily
Categories: Industry ကိုLucia Si ဧပြီ 7, 2021 ဧပြီ 7, 2021 မှာ Posted
Genesis’ drone show brokeaGuinness World Record for “ The Most Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) airborne simultaneously” (Source: Genesis)
ပြပွဲအတွင်း ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး SUV ကားအဖြစ် ပြသခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဇိမ်ခံကားအမျိုးအစား G80 အပြင် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး SUV ကားအမျိုးအစား GV80 ကိုလည်း ပြသခဲ့ပါတယ်။ နှစ်လမ်းသွားကို သူ့ရဲ့ အထင်ကရနေရာလို့ သတ်မှတ်ထားပြီး ဗိသုကာ၊ မော်ဒယ်လ်နှစ်မျိုးစလုံးဟာ အားကစားကို ပြေပြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပြပါတယ်။
Genesis လို့ အမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Hyundai Auto ရဲ့ တန်ဖိုးကြီး ဆလွန်းမော်ဒယ်တွေဆိုရင်တော့ နှစ်အနည်းငယ်သာ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကစပြီး Genesis ရဲ့ ခေတ်မီဇိမ်ခံအဖြစ် တံဆိပ်ခွဲလုပ်ငန်းတွေက အဆင့်မြင့်မြင့် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဒီဇိုင်း၊ လုံခြုံမှုနဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု အသားပေးထားပါတယ်။
Genesis ဟာ တောင်ကိုရီးယားမှာ အခြေစိုက်ပြီး အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ ရုရှားနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက နိုင်ငံကြီးတွေကို ရောင်းချနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်အမှတ်တံဆိပ်ဟာ ကမ္ဘာတစ်လွှားက မော်တော် ကားဖော်ထုတ်မှုတွေအတွက် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးအပ်နေပြီး သူ့ရဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့ဘဝကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာဦးတွင် “စားသုံးသူများအစီရင်ခံစာ ” နှင့် ဂျေ.D.စသည်တို့သည် လေးစားစရာ စက်မှုလုပ်ငန်း ဋီကာများ၏ အကဲဖြတ်ခြင်းကို ခံရသည်။ ခိုးဆိုးလုနှိုက် နှင့် မြောက်အမေရိက နှစ်အလိုက် မော်တော်ကား ဆုများလည်း ပါဝင်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာဦးပိုင် G70, G80, G90, GV70, GV80 တို့ပါဝင်တာကြောင့် ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ခင်းကျင်းထားပါတယ်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ G80 နဲ့ GV80 မော်ဒယ်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးမယ့် တရုတ်ဈေးကွက်ဟာ တရုတ်ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကို ပြည့်မီဖို့ လုံလောက်နိုင်ဖွယ်ရှိပေမဲ့ ကြွယ်ဝမှုနဲ့ ဈေးကွက်ပျက်မှုအပိုင်းမှာတော့ အားနည်းနေပါတယ်။
Topics: မြင်ကွင်း81:သန်းဝင်းကို တရုတ်လို ဘယ်အရာမဆို
ကမ္ဘာ့စစ်မြေပြင်အဖြစ် တရုတ်ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ခဲ့သလဲ? ပထမအချက်အနေနဲ့ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အမေရိကန်ဈေးကွက်နှစ်ခုဟာ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်တွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သရဖူထိခိုက်မှုတွေကတော့ လျော့ချခံနေရပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်ချက်အနေနဲ့ ထိရောက်တဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေပေးနိုင်မှုတွေကြောင့် တရုတ်ဇိမ်ခံကားဈေးကွက်ဟာ လက်ရှိမှာ ဧည့်ကြို၁၉.၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာပြီး ၂၀၂၀ခုနှစ်မှာ ကားအစီးရေ ၂၇၉သန်းအထိ ရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ Genesis ဟာ ဇိမ်ခံကားလုပ်ငန်းမှာ ပြိုင်ဘက် အများအပြားပါဝင်တဲ့ Mercedes, Audi နဲ့ BMW တို့ကို နှစ်စဉ် သိန်း ၇၀ အထက်အထိ ရောင်းချနေရပါတယ်။ ကိုရီးယားကားဈေးကွက်ကျဆင်းမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တရုတ်ကားတွေကလည်း ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြည်တွင်းကို ဝင်ရောက်လာဖို့ မရေရာမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာတော့ Hyundai နဲ့ KIA တံဆိပ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယားကားအစီးရေ ၄၁ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
“ တရုတ္ျပည္မွာ မိတ္ဆက္တဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းမွာ အဓိကအေရးပါဆံုးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္၊ အေရးအႀကီးဆံုး က႑သစ္အေနနဲ႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္. ဒီအမွတ္တံဆိပ္ကို တည္ေဆာက္ရာမွာ အာရံုစိုက္သြားမွာပါ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္သြားမွာပါ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တရုတ္ပရိသတ္ကို ဘယ္လိုဆြဲေဆာင္မလဲဆိုတာ မီးေမာင္းထိုးျပဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္” ကမၻာဦးကားလုိ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ Zone အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ Marcus Heinner က ေျပာပါတယ္။
(Source: ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဆောင်းပါးများ)
တရုတ်စားသုံးသူတွေအတွက် အသားပေးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ Genesis က ထုတ်လုပ်ဖွင့်လှစ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး တရုတ်ဈေးကွက်ဝေစုကိုအခြေခံတဲ့ တိုက်ရိုက်စီးပွားဖက်တွေနဲ့ အွန်လိုင်းလမ်းကြောင်းတွေကို စိတ်ချရတဲ့ လုပ်ငန်းပုံစံအသစ်တစ်ခုဖြစ်အောင် တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သည်တံဆိပ်ဟာ တရုတ်စားသုံးသူတွေအတွက် ရောင်းသူမဲ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒါကို မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ဖို့ အတွက် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ ကြေငြာစာတမ်းကို ထုတ်ဝေ လိုက်ပါတယ်- “ခင်ဗျားရဲ့ ကမ္ဘာဦး” ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စားသုံးသူများအစုအဖွဲ့၏ ခိုင်မာသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဟန်၊ သတ္တိရှိရှိ တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှု၊ အတွေးအခေါ် ဗေဒနှင့် ထူးခြားသော သရုပ်ဖော် ဖန်တီးမှု စသည့် အမှတ်အသားအဖြစ် ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Genesis က အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ေစ်းႏွဳန္းတစ္ခုဟာ ေစ်းႏွဳန္းတစ္ခုေအာက္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစဖို႔ ကတိျပဳထားတဲ့ ေစ်းႏွဳန္းတစ္ေျပးညီ အားလံုးကိုေရာင္းခ်တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ ရွန္ဟိုင္း Fashion Week တြင္ ရွန္ဟိုင္း “The World House of the Shanghai ” သည္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ခံစားရေစရန္ ၎၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ အမွတ္တံဆိပ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ျဖန္႔ၾကက္ထားသည္။